The Masteron Enanthate The Longer Acting And Steroid Anabolic Steroid (AAS)
/Blog/Masteron Enanthate/The Masteron Enanthate The Longer Acting And Steroid Anabolic Steroid (AAS)
Posted on 04 / 03 / 2019 by Dr. Patrick Young nanoratra tao Masteron Enanthate.
Ny momba ny Masterant Enanthate
1. Inona no atao hoe Masteron Enanthate? 2. Ahoana no iasan'ny Masteron Enanthate?
3. Nandritra ny antsasaky ny fiainana ny Masteron Enanthate 4. Masteron Enanthate
5. Masteron Enanthate vs Propionate 6. Masteron Enanthate Cycle
7. Side effects of Masteron 8. Buy Masteron Enanthate
9. Masteron Enanthate Reviews 10. Fotoana hitadiavana ny Masteron Enanthate
11. Fampiasana fitsaboana amin'ny Masteron
Inona no atao hoe Masteron Enanthate?
Masteron Enanthate Ny anaran'ny simika Drostanolone Enanthate dia iray amin'ireo steroids anabolic anabolic (AAS) izay mametaka punch rehefa manangona sy manapaka. Io no vahaolana lava kokoa amin'ny Masteron izay nampidirina tao amin'ny 1950s ary namidy tamin'ny anarana varotra isan-karazany, anisan'izany i Masteril sy Drolban.
Ny Masteron Enanthate dia nanjary nalaza tamin'ny 2000s ho fanafody sy ho fampiroboroboana ny fampisehoana. Ny fangatahana dia avo dia avo avokoa, ary na dia amin'izao fotoana izao aza dia anisan'ireo steroïde ampiasaina matetika izy noho ny toetra matanjaka manohitra ny estrogenic.
Ahoana no iasan'ny Masteron Enanthate?
Mety hanontany tena ianao hoe ahoana no fomba fiasan'io zava-mahadomelina mahatalanjona io. Masteron dia dihydrotestosterone azo avy amin'ny firaisana, ary rehefa mampiasa izany dia misy ny fitomboan'ny habetsan'ny DHT ao amin'ny vatana.
Ao amin'ny vatantsika, ny enzyme 5a-reductase dia mampiavaka ny DHT ao amin'ny prostate, ny volon'ondry, ny fitsapana ary ny loharano adrenalny ka manome ny lehilahy lahy mitovy endrika. Ao amin'ny lehilahy, ny 5% amin'ny fitsapana izay mamokatra ny vatana dia mivadika ho DHT, ary midika izany fa ny fitomboan'ny testosterone mitarika amin'ny fitomboan'ny DHT.
Tsy mahasalotra ny DHT ary noho izany rehefa ampiasainao ny Masteron dia mampitombo ny DHT ao amin'ny vatana izy io ary tsy miteraka fatran'ny estrogen. Noho izany, tsy voatery hijaly amin'ny vokatra mahatsiravina ianao, na inona na inona ny dosion Masteron izay tianao hofidiana.
Ny Masteron Enanthate dia miasa toy ny marefo amin'ny tosidra aromatase ary tsy mahagaga raha nampiasaina tamin'ny fitsaboana ny homamiadana. Izy io dia miasa amin'ny fanakanana Estrogen ao amin'ny tranon-tsakafo ao amin'ny tranon-tsoroka.
Nandritra ny antsasaky ny fiainana ny Masteron Enanthate
Mety hanontany tena ianao hoe hatraiza no hijanonan'ny Masteron Enanthate amin'ny rafitrao. Ny antsasaky ny antsasaky ny Masteron Enanthate dia andro 8-10.
Fotoana hitadiavana ny Masteron Enanthate
The time detection for Masteron Enanthate dia telo volana. Midika izany raha mikasa ny hampiasa azy ianao alohan'ny handraisanao fifaninanana, dia tsy maintsy hampiasa azy io ianao telo volana mialoha.
Fampiasana fitsaboana amin'ny Masteron
Nandritra ny taona maro dia nampiasaina i Masteron mba hanasitranana ny homamiadana tsy mety ampiasaina amin'ny fiantraikan'ny vehivavy menavava. Ny MasterDA dia nankatoavin'ny FDA handinika izany, saingy noho ny safidy maro izay misy amin'izao fotoana izao; Ny fampiasana azy dia tsy malaza toy ny tamin'izany fotoana izany.
Ho an'ny sasany, dia mety ho toy ny steroid vaovao eo amin'ny tsena ny Masteron Enanthate, saingy ny marina dia ireo nampiasa azy io mba hahalalany hoe tena tsara izany. Indrindra indrindra, raha ny amin'ny fandoroana ny fatin'aretina! Ny tena fifanarahana. Na izany aza, tsy midika izany fa handeha ianao aza manary tavy ary ny hozatra amin'ny fotoana iray ihany. Hahazo ny hozatra ianao raha izany no tanjonao. Ireto ny sasany amin'ireo vokatry ny Masterent Enanthate izay manenina ny rehetra;
- Mitefy ny hozatra
Nandeha an-tongotra tao amin'ny toeram-pandihizana ve ianao ary nahatsikaritra fa misy olona tsy mampiofana mafy toy ny ataonao nefa manana hozatra kokoa noho ianao? Ny tsiambaratelo dia ny ankamaroan'izy ireo dia mampiasa ny steroids tsara indrindra hahatratrarana izany. Raha reraka ianao amin'ny maha-malaina anao dia mandray ny Masteron Enanthate ny làlana handeha.
Miaraka amin'ny Ment Enanthate, ianao dia hahatratra ny fitomboan'ny vozona lehibe ary hahatratra ny habetsahanao izay efa nofinofisinao foana. Masteron Enanthate 472-61-1 dia manome anao ny hozatra tsara indrindra izay tsy dia mahagaga loatra. Ny antony ilazana izany dia satria; Ny fitehirizana rano tsy mitranga amin'ny fampiasana ny Masteron Enanthate. Ny hozonao dia ho feno sy mafy foana, ary azonao eritreretina hoe firy ny hira fiderana azonao avy amin'ny fianakavianao sy ny namanao.
Raha mijaly noho ny lanjany be loatra ianao, dia afaka milaza fa ny fitaratra dia iray amin'ireo zavatra ratsy indrindra tsy tianao hotratrarina. Ny trano fitafy dia lasa iray amin'ireo faritra tadiavinao. Ny tena mbola mbola tsy matoky anao mihitsy ianao ary isaky ny misy olona mijery anao, ny zavatra voalohany eritreretinao dia ny fijerin'izy ireo ny tavy mihozongozona.
Na dia antony sasantsasany aza no antony, dia mety te-handany lanjany ianao, ka ny tombontsoa tsy hita isa no omena azy. Ny fihenan'ny lanjany dia tsy manampy anao fotsiny ny mijery ny akanjonao, fa manampy anao koa ny fahasalamanao mba hihatsara kokoa. Ho hitanao fa rehefa manana lanjan-danja bebe kokoa noho ny tokony ho izy ianao, dia ny dian-tsoa indray dia lasa ny filahatry ny andro. Mbola misy fahasamihafana ara-pahasalamana bebe kokoa izay azonao entina toy ny diabeta 2.
Soa ihany, ny fandatsahana ny lanjany fanampiny dia dingana iray. Ny Masteron Enanthate dia fomba iray manaporofo sy mahomby amin'ny fifampiraharahana. Izy io no fanalahidy handresena ny lanjany be loatra ary tsy isalasalana fa ny iray amin'ireo otrikaretina malaza indrindra ny fianianan'ny olona amin'ny fandoroana ny tavin-kena. Ireo izay efa nampiasa izany dia afaka miaiky izany fa mihamazava izany. Raiso ity androany ity ary tanterao ny tanjona rehetra nataonao. Na tsara kokoa aza, mahazo ny traikefa ara-pahasalamana sy ny fanitarana ny fiainanao nandritra ny taona maro noho ny fampiasana ny Masteron Enanthate.
Iza no tsy tia sombin-tanana lehibe mampiseho ny t-shirt? Manao fitsangantsanganana fotsiny ianao, ary maniry ny hanery azy ny olona mba hanamarina fa tena izy izany. Ny fanajana azonao avy amin'ny olon-drehetra dia zavatra iray hafa milaza aminao fa be dia be ianao.
Raha te hampiakatra be ianao, dia ambony Drostanolone Enanthate Ny dosage dia hanampy anao amin'izany. Ankoatra izany, ny fampidirana azy ao amin'ny kitaposinao dia hanampy amin'ny fampihenana ny vokatra estrogenic izay mety ho vokatry ny steroids hafa. Ny mety ho vokatr'ilay Masteron Enanthate dia mety tsy ho betsaka, fa ny tombontsoany dia ny faharetany. Ny fiantraikan'ny Masteron Enanthate dia tsy vokatry ny fitazonana rano, fa noho ny fitomboan'ny testosterone maimaim-poana.
Ny tanjaky ny hozatrao, na izany aza, dia voafaritry ny fitsaboana ataonao sy ny sakafo fihinanao. Ataovy azo antoka fa mihazakazaka miaraka amin'ny tanjonao ny tanjonao.
Ny famokarana dia tena mahazatra ho an'ny mpanao biriky, satria midika izany fa hitodika amin'ny tonony ianao. Rehefa te hanapaka ianao, ny tanjona kendrenao dia ny mampihena ny fatin 'ny vatanao raha mbola mitazona ny masin'ny muscle. Indraindray ny absaka dia matetika ao, saingy mety hafenin'ny matavy izy ireo. Mba hampisehoana ny hozatra etsy ambany, dia tokony hiasa tsikelikely ianao, ary miantoka ny tsy hahavery ny hozatry ny ezaka ataonao hanorenana. Koa rehefa tapaka dia tsy maintsy manao izany ianao.
Rehefa tapahina dia mahazo mionona sy voafaritra kokoa ny vatanao. Raha vantany vao miantso ianao, dia ho faly ianao amin'ny fomba mahatalanjona ny tombontsoa azo avy amin'ny Drostanolone Enanthate. Averagely, maro ny mpandinika bouddha no manomana ny vatany mandritra ny roa ambin'ny folo ka hatramin'ny 16 herinandro. Tombontsoa ho an'ny tombontsoa ho an'ny tombontsoa ho an'ny marea dia lasa mahatalanjona mandritra ny enina herinandro.
Amin'izay indrindra ny ankamaroan'ny vatana dia efa noraisina ary ny Masteron Enanthate (472-61-1) manampy amin'ny fanafoanana ny tavin'ny tavy. Ny Masterant Enanthate aloha sy aorian'ny fahasamihafana izay ho hitanao aorian'ilay famokarana dia hahagaga anao. Hanana endrika malefaka sy tsara tarehy izay efa nofinofinao foana ianao.
Masteron Enanthate ary Masteron Propionate dia samy androgenic / anabolic steroids izay tena mahasoa amin'ny fanorenan-trano. Aza mamitaka ny anarany mba hieritreritra fa mitovy ny roa; Manana fahasamihafana izy ireo.
Manohitra ny fihenan'ny asa ny Masteron Propionate vs. enanthate. Masteron Propionate dia fihetsika manafaka anabolika ary ny Masteron Enanthate no mifanohitra amin'izany. Miaraka amin'ny Masteron Propionate, mety hahatsikaritra fiovana eo amin'ny vatanao ianao mandritra ny telo herinandro voalohany raha miaraka amin'ny Masteron Enanthate, mety hitondra anao mihoatra ny enina herinandro ny fiovana.
Masterone Enanthate dia efa ela, ary midika izany fa tsy maintsy hampiditra azy matetika ianao mandritra ny fitsaboana. Etsy ankilany, Masterone Propionate dia ezaktera fohy kokoa izay matetika no mandefa isan'andro na isan'andro. Ny olona izay mampiasa phobia dia mampiasa ny Masteron Enanthate. Ny dosion Propionate Masteron dia matetika 50-150mg / ml raha ny an'ny Enanthate dia 200mg / ml.
Manana fahasamihafana goavana koa ny antsasaky ny fiainana an-taonany ny Masteron Propionate vs. Enanthate. Ny antsasaky ny antsasaky ny Masteron Enanthate dia folo andro raha ny an'ny Masteron Propionate dia andro 2.5. Ny mpampiasa Masteron Propionate dia mametaka azy miaraka amin'ny karazana fohy hafa toy ny Testosterone Propionate, Trenbolone Acetate na ny NPP (Nandrolone Phenylpropionate). Amin'ny lafiny iray, ny steroïde izay efa voamarina ela dia mifanaraka kokoa amin'ny Masteron Enanthate. Mety ho Deca Durabolin, Trenbolone Enanthate, Testosterone Enanthate na Cypionate.
Ny Masteron Enanthate dia mahatratra haavom-pivoarana ao amin'ny vatana tsikelikely raha ampitahaina amin'ny Propionate. Noho izany dia mitaky fotoana bebe kokoa hanalavirana ny rafitra iray izany. Ny fampiasana azy amin'ny fampiasana azy dia mora kokoa noho ny an'ny Masteron Propionate. Izany dia satria ny HPTA ihany no mamerina indray mandeha raha ny steroïde dia mazava tsara amin'ny rafitrao.
Ny fotoana fametrahana ho an'ny Masteron Propionate dia telo herinandro raha ny an'ny Enanthate dia telo volana. Raha ny momba ny cycles, dia efa ela kokoa noho ny an'ny Masteron Propionate ny tsingerin'ny Masteron Enanthate. Ny cypique Masteron Propionate dia latsaky ny 8 herinandro raha toa ka mila mihoatra noho izany.
Raha ampitahaina amin'ny Masterant Prop vs Enanthate, ny ankamaroan'ny mpanao fikarohana dia milaza fa manome valiny mitovy izy ireo, fa ny sasany kosa tia ny Enanthate amin'ny Propionate.
Masteron Enanthate Cycle
Raha mampiasa Masteron Enanthate dia ampy ny dosage amin'ny 400-600 mg isan-kerinandro mba hanomezana anao ny voka-tsoa ilainao. Misaraka roa ny dipoavatra ary avo roa heny isan-kerinandro. Midika izany fa ny fampidirana voalohany ny herinandro dia 200-300mg raha ny faharoa dia 200-300mg.
Ho an'ny voalohany, dia mety haharitra enina ka hatramin'ny valo herinandro ny Sampan-draharahan'ny Masteron Enanthate. Ireo izay efa mandroso dia manana herinandro 6-10 mandritra ny herinandro enina ambin 'ny folo.
Manampy Masteron mba hitsapana tsingerina dia atolotra satria ny tazomoka dia manome ny habetsaky ny hormone izay tena ilàna azy. Noho izany, ny vatany dia afaka miasa araka ny tokony ho izy.
Ny sikin'ny mpandidy dia manana dosonin'ny Masteron Enanthate amin'ny 400mg sy 300-500mg amin'ny Testosterone Enanthate.
Rehefa mampiasa steroid ianao, a PCT dia tena zava-dehibe tokoa. Manampy haingana ny vatana. Amin'ny tranga misy antsika, ny Masteron Enanthate dia tsy mamafy; Noho izany, tsy voan'ny aretina ianao. Ny fampiasana an'i Nolvadex dia ampy mandritra ny PCT.
Raha toa ianao ka mametaka ny Masteron Enanthate miaraka amin'ny fofona mampangotraka izay tena matanjaka, dia ilaina ny maka tahaka ny inhibitor aromatase mahery toy ny Aromasin, Letrozole na Arimidex. Ny tsy fampiasana ny atidoha aromatase dia mety hahatonga anao hijaly amin'ny gynecomastia.
Miandrasa ny mijaly amin'ny vokatra hafa raha misy fanafody. Ny zava-dehibe dia ny henjana. Matetika loatra ianao no te-hikotrika amin'ny hozatra nefa tsy azonao antoka fa tsy ho salama ny fahasalamanao. Ny vaovao tsara dia ny Masteron Enanthate no mamela anao haka ny voankazo rehetra tsy misy loza mety hanimba ny fahasalamanao. Anisan'ny steroids tsara indrindra izy io satria tsy misy ny fiantraikan'ny Masterson.
Ao amin'ny lehilahy, io steroid anabolika io dia mendri-pandeferana, ary tsy azo inoana ho azy ireo ny mijaly amin'ny vokatr'ilay Masteron Enanthate. Ho an'ny vehivavy, ny dosion ambany dosie ambany dia asaina satria mety hahatonga azy ireo hijaly noho ny virilization ny avo lenta.
Ny ankamaroan'ny vokatry ny drostanolone Enanthate dia androgenic. Mety ahitana volo volo, volo, ary akne. Ireo Side effects of Masteron dia tsy mety ho mafy loatra, fa mety ho ny fampiasana azy amin'ny dosie avo Masteronon. Ny lehilahy manana tantaram-panafody baldness dia mety ho voan'ny aretina amin'ny volo.
Ao amin'ny vehivavy, ny soritr'aretina virilization izay mety hitranga dia volo tsy voadonan'ny volo, clitoris lehibe, ary feo lalindalina kokoa. Ny vehivavy dia voatery hampiasa tsara ny fampiasana Drostanolone Enanthate ary hanamarina mandrakariva ny soritr'aretina fanesorana izay mety hampiseho. Ny sasany dia mety hampiseho kokoa ny mason'ny Masteron Enanthate; Noho izany, ny vokatr'ilay fanafihan'ny Drostanolone dia ho azy ireo kokoa. Atsaharo ny fampiasana raha mahita marika famantarana ny virilization ianao.
Mety hampitombo ny kolesterola ratsy sy ny fihenan'ny kolesterola tsara. Nisy koa ny tatitra momba ny fiovan'ny tosidra, saingy mahalana izany.
Mety misy ny fanafoanana ny famokarana testosterone voajanahary ao amin'ny vatana. Miverina amin'ny ara-dalàna raha vao vita ny fampiasana ny zava-mahadomelina. Raha te hamehy ny taham-pahafahanao ny famokarana testosteron dia miverina amin'ny ara-dalàna, dia tokony hanao andrana Post Cycle Therapy ianao rehefa vita amin'ny cycosis Masteron.
Saika ny bodybuilder, ny atleta na ny modely amin'izao fotoana izao dia mandany Steroid amin'izao fotoana izao. Mety ho ny hozatra, ny fihenanam-pahefana, na ny fandrosoana. Nanontany tena ve ianao hoe aiza izy ireo no mividy ny entany?
Raha ny fividianana ny Masteron Enanthate, dia nividy izany an-tserasera na tao amin'ny fivarotana iray. Mampalahelo fa ity dia steroid izay tsy mora azo. Raha tokony handeha amin'ny magazay hitahiry azy io ianao, aleonao mividy izany amin'ny aterineto. Amin'izany fomba izany, dia miezaka ny tsy handany fotoana sy vola izay hampiasanao ny fandehanana eny an-toerana.
Raha manapa-kevitra ny hividy an'io an-tserasera io ianao, dia misy antony maromaro mila dinihinao mba hahazoana antoka fa tsy ny volanao ihany no hidina ny draina ary koa mba hahazoana antoka fa hividy ny kalitaon'ny Drostanolone Enanthate ianao. Miaraka amin'ny vokatra tsara dia azonao antoka fa hahatratra ny vokatra tsara indrindra ianao.
Ny zavatra voalohany hitanao dia ny tranonkala maro no manolotra mivantana ny Masteron Enanthate, fa tsy ny hamaroanareo rehetra no nalehanareo. Tokony hahita orinasa iray an-tserasera ianao izay atokisanao. Ny manome iray dia hanome fiadanana an-tsaina anao amin'ny fahafantarana fa tsy ho afa-baraka ianao. Tsy voatery hanahy koa ianao fa mety hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny fahasalamanao ilay vokatra. Ahoana no ahafantaranao fa azo antoka ny tranonkala iray?
Mandehana ho an'ny tranonkala iray izay manolotra vaovao maro momba ny tenany sy ny vokatrao. Zava-dehibe ny hahalalanao ny toerana misy azy, ny fifandraisana ary ny vokatra omeny mba tsy hisongadina.
Vakio ny valiny nomen'ny olona izay nividy vokatra avy amin'ny orinasa. Fanamarinana tsara dia midika fa mahazo antoka ianao fa mividy orinasa malaza.
Aza manadino ny tolotra atolotra amin'ny Internet. Efa fantatrao fa lafo ny vidiny ary tsy te hampiadana ny fahasalamanao amin'ny vola ianao. Ny vohikala ankamaroan'ny tranonkala dia hanolotra ny vokany amin'ny vidiny lafo vidy, mba hahafahan'izy ireo manintona mpividy maro. Fantaro foana fa ny fihenam-bidy mahavariana dia manjavozavo ary tokony hikaroka tranokala iray izay manolotra vidin-javatra marina. Raha manao izany ianao, dia azonao antoka fa hahazo vokatra izay tsy hampidi-doza ny fahasalamanao.
Ai dia miteny hoe, "Raha mahatsapa olana goavana ianao, dia fantatrao fa tena manimba izany. Mifoha ianao, mijery ny tenanao, ary toy ny hoe mitombo isan'andro ny lanjanao. Ankoatra izany, tsy fantatrao izay hatao. Amin'ity fotoana ity, efa nanandrana vokatra an-taonany ianao amin'ny fomba iray mba handaniana lanjany, fa aorian'ny volana maromaro, dia tsy manakaiky ny tanjonao ianao. Manomboka mandà ianao, ary ny hany safidy anananao dia ny manaiky ny tenanao. Tao aho ary natoky ahy Masteron Enanthate dia nanampy ahy handatsaka ny lanjany rehetra. Nampiasaiko nandritra ny telo volana izy ary izay rehetra azoko lazaina dia ny mendrika izany. Hatramin'izao dia efa mihoatra ny telopolo kilao aho ary mipetraka miverina ary mijery ny lanjan'ny lanjany; Tiako ho fantatro ny momba an'i Masteron aloha. Raha mahatsapa ianao fa mila fitiavana bebe kokoa ny vatanao dia ity no zava-mahadomelina tsara indrindra ampiasaina.
Hoy i Nianzu: "Nanandrana mpihatsaravelatsihy roa aho saingy toa ity izy ity no toa resiny avokoa. Ny hafa rehetra dia nanome ahy hozatra mafy izay nandao ahy tao anatin'ny fotoana fohy, na inona na inona nataoko mba hanandrana sy hihazona azy ireo. Miresaha momba ny fitehirizana rano! Rehefa nikarakara azy ireo aho, dia nanomboka nividy steroide tsara kokoa aho izay hanome ahy fandrosoana maharitra. Nahita fifanarahana tsara tao AASraw aho tamin'ny farany ary nividy Masteron Enanthate. Io vokatra io dia nanova tanteraka ahy. Mihamitombo be ny hozako. Sarotra sy voafaritra tsara izy ireo, ary toa tsy mandeha izy ireo na dia ajanony aza ny fampiasana azy. Tena mino aho fa ny Masteron Enanthate no steroid malemy indrindra raha mitady valiny mahagaga izay tsy hanjavona aorian'ny fotoana. "
Hoy i Fang: "Mampidi-doza ny fampiasana zava-mahadomelina rehefa mitranga izany. Tiako foana ny manana fikarakarana lehibe, ary rehefa nanapa-kevitra ny hanao famerenan-danja aho dia tsy azoko antoka hoe inona no tsara indrindra ho ahy. Soa ihany, tamin'ny alàlan'ny tolo-kevitr'ireo namako tao amin'ny toeram-piofanana, dia nanolo-tena ho an'ny Dronostalone Enanthate aho. Efa saika tamin'ny diany aho, ary hitako fa mahagaga. Tena tsy afaka miandry ny valiny aho. Miezaka manova ny vatanao ve ianao? Masteron Enanthate. Mendrika ny vola madinika tsirairay. "
Ah lam dia miteny hoe: "Efa herinandro mendrika aho izao, ary mitoloko sy mahazo tombony amin'ny hozatra izay hanampy ahy amin'ny fifaninana bikini aho amin'ny volana manaraka. Raha ny fisidinana dia tsy mahasosotra izy ireo ary efa nahazatra azy ireo. Tsy mbola nandevozin'ny jitera na ny vokany aho hatramin'izao. Na dia niova be aza ny vatako. Nahazo tombony goavana aho ary niankina tamin'ny vatako koa ny vatako. Tena matoky aho ny amin'ny fifaninanana, ary fantatro fa haka tombony maro aho noho ny Masteron Enanthate (472-61-1).
Hoy i Chenric: "Ny tanjako sy ny fiaretako dia eo am-panampiana ity steroid ity mandritra ny herinandro vitsivitsy. Tsy dia nampiahiahy kely aho rehefa nandidy azy avy any AASraw, fa nilaza tamiko ny anabaviko fa mivarotra vokatra tsara izy ireo. Marina tokoa ny zavatra nolazainy fa azoko. Izany zavatra izany dia efa natolotra! Nihevitra aho fa ny fiovana tokana hitako dia fiovana tamin'ny vatako. Mihoatra lavitra noho ny hozatra mihamitombo kokoa, dia nitombo ihany koa ny tanjako. Amin'izao fotoana izao, afaka manao ambin-javatra maromaro aho mandritra ny fanatanjahantena. Tsy tonga saina aho ary afaka manofa isan'andro. Mahatsiaro tena haingana aho, ary ankehitriny dia afaka manomboka ny maraina aho ary mandeha miasa avy hatrany. Nanana traikefa tsara avy any AASraw koa aho! Mankasitraka tokoa!
Ny Metabolismin'ny Steroids Anabolic-Androgenic, Victor A. Rogozkin, pejy 1-19
Anabolika, William Llewellyn
Ny diksionera momba ny zava-mahadomelina: data chimique, sy rafitra ary .., natontan'i J. Elks
Metenolone enanthate for sale avy amin'ny mpamatsy mozenolone enanthate ao Shina
Comments no mihidy.
Masteron (propionate Drostanolone) Ny fiantraikany, Dosage, Side effects Boldenone Undecylenate: 8 Effective Side Effects You Want to Avoid
Tamoxifen Citrate (Nolvadex) poids
Ny MK-677 (Ibutamoren) mandeha tsara amin'ny hozatra ho an'ny hozatra? Review Sarm [2019 NEW]
Ny Steroids Anabolic 10 malaza indrindra dia matanjaka
Copyright © 2019 aasraw Ny zo rehetra voatokana. Designed by www.cofttek.com www.buyaas.com www.apicmo.com www.wisepowder.com www.phcoker.com